I-TRF kuRadio - Isisekelo Somvuzo - Uthando, Ubulili ne-Intanethi
Izinhlelo zokufunda zesikole
Ikhaya TRF ku-Radio
UMary Sharpe wamenyelwa ukujoyina USara Brett kuRadio 5 bukhoma ukuxoxa ngokwanda okumangazayo kwenani labantu abasha abadinga ukwelashwa ngokocansi kwi-NHS. Kule ngxoxo yangomhla ka-7 Okthoba 2019 sifunda ukuthi ukufunwa kwabantu abangaphansi kweminyaka engu-19 yokwelashwa ngokocansi kukhuphuke kathathu eminyakeni embalwa nje. Esikhathini se-2015 kuya ku-2017 bekukhona ukuhanjiswa kwe-1,400 NHS kwabantu abasha kwabelaphi bezocansi. Esikhathini esilandelayo kusuka ku-2017 kuya ku-2019 lokhu kukhule kwaba cishe ngama-4,600. Yizwa imicabango kaMariya ngendima yezithombe zobulili ezingcolile ezisetshenziswayo ekushayeleni lolu shintsho.
I-PM yizindaba ze-flagship nezinhlelo zamanje zamanje kwi-Radio 4, okusakazwa e-UK, futhi ngempela emhlabeni jikelele. NgoMsombuluko 1st Ngo-Ephreli 2019 Evan Davis wethule ingxenye ye-6 ngomzuzu wezindaba Chris Vallance ohlelweni lwase-UK Lokuqinisekisa Ubudala ukunciphisa ukufinyelela kwezingane kalula ezithombeni zobulili ezingcolile ze-inthanethi. UMary Sharpe, oyi-CEO ye-TRF, uthi kungani lo mthetho usabalulekile, noma ngabe awuphelele.
I-BBC Radio Scotland yinethiwekhi yethu yendawo. I-TRF ivele emibukisweni eminingi futhi ungasiphenya njalo BBC Umsindo.
Umthengisi wemfashini waku-inthanethi uBoohoo.com wayenenye yezikhangiso zayo ezazvinjelwe i-Advertising Standards Authority ngokusebenzisa isiqubulo “Thumela ubunqunu” ukukhuthaza izingubo ezinombala wesikhumba. UMary Sharpe ujoyine uJess McBeath kanye nabanye abaphawula embukisweni weKaye Adams kwi-17 Okthoba 2019 bebheka ukuhlakanipha kwesinqumo kusuka endaweni yokubuka ukuvikela izingane.
Imiphi imiphumela yokuthunyelwa kwemiyalezo yocansi yintsha? UMary Sharpe wabonakala eGood Morning Scotland ku-3 Septhemba 2019 kanye neRape Callen Scotland. Funda kabanzi ngokuthumelelana imiyalezo yocansi kanye nomthetho eScotland lapha.
Ngesimemezelo sosuku lokuqaliswa kokuqinisekisa ubudala e-UK, uMary Sharpe wajoyina i-call-long-in noLaura Maxwell ngo-18 April 2019. Ukukhishwa kwamaminithi we-6 alandelayo kufaka imicabango yakhe engxenyeni yokugcina yohlelo.
Ukukhuluma nabantu abasha mayelana nezithombe ezingcolile kuyisihloko senkulumo-mpikiswano eyabanjwe Kaye Adams Ngomhlaka 20 Mashi 2019. UMary Sharpe waboniswa kanye noSarah, omunye wabomama abavela ku-Channel 4 yochungechunge oluthi "Mums Make Porn", u-Andrea Chapman ongumeluleki kanye nesishoshovu se-porn uJerry Barnett.
Yizwani uMary Sharpe ekhuluma ngemvume kanye nezithombe ezingcolile ezingxenyeni ezimfushane ku- UStephen Jardine bonisa ku-15 February 2019.
John Beattie babambe ingxoxo evulekile ezithombeni zobulili ezingcolile ezisetshenziswa ku-20 November 2018. Izivakashi zazinguMary Sharpe, u-Anne Chilton ovela e-Relationships Scotland nase-Emma Kenny.
UStephen Jardine uxoxe noMary Sharpe, kanye nomfundisi nomama othintekayo ohlelweni lwe-Radio Scotland phakathi nonyaka ekuseni ngo-17 July 2018.
UMary Sharpe waxoxwa ngu-Ian McNally waseRadio Napier engxenyeni ye-10 emidlalweni yamaDayigramu. Ishicilelwe ku-intanethi ngomhla ka-27 Okthoba 2017.
Umsakazo ongaphezu kweScotland
Isevisi Yomhlaba Ye-Radio Sputnik eMoscow yaxoxa noMary Sharpe ngemizuzu ye-11. Ngesikhathi sokuxoxwa kwabo abaxoxwa ngokunyuka okushaqisayo kwezokuhlukumeza ngokocansi kwengane okukhulunywa ngayo eNgilandi naseWales. Isakazwa ezilalelini zomhlaba jikelele ngo-9 Okthoba 2017.
UMary Sharpe oxoxwa nguStig Abell kule ndawo ye-3 ngomzuzu weLBC Radio eLondon, 21 August 2016. Yaya UK ngokubanzi.
UMary Sharpe uxoxisana nokuqeqeshwa kokuqwashisa ngocansi kwinkulumo ye-18 ngomzuzu kaStephen Nolan kuRadio Ulster eNyakatho Ireland.
Chofoza lapha uma ufuna ukuzwa okuningi ngezingxoxo ezihlobene ezinhlelweni zikamabonakude zikaStephen Nolan.